Avenue Victor Hugo bụ ihe uzo nke 16 Arrondissement of Paris. malite na Charles de Gaulle (makwaara dị ka Etoile) na-agwụcha na Tattegrain (na-aghọ ụzọ Henri Martin). Ọ na-otu n'ime mmadụ iri na abụọ ụzọ amalite na Etoile, nke-abua kwa nke-abua kari nke-iri na abua, mgbe uzo des Champs Elysees.
Fan nke opera? Mgbe ahụ, a ma ama n'okporo ámá na Paris bụ maka gị! Nke a n'okporo ámá bụ obibi na Ụlọ ihe nkiri des Champs Elysees. The opera bụ n'ụlọ nke abụọ ebube orchestras. Ọ bụrụ na ị nwere obere mmezi oge, anyị na-akwadoro ịkwụ ụgwọ nleta na akụkọ ihe mere eme a ebe arụmọrụ. Ọzọkwa, a gbasaa na-akwanyere ùgwù n'ihi na mkpa ya na emepụta ejiji. Ọtụtụ ama ụdị pụrụ ịchọta ebe a gụnyere Vuitton, Loewe, Celine, na ndị ọzọ.
Lyon Airport ka Avignon insgbọ oloko
Montmartre E nwere mgbe ihe-atụle ga-ebe izu ike nye Paris si nkà ìgwè mmadụ. dị mwute ikwu na, elu ahịa dị ka a N'ihi nke njem chugaworo ọtụtụ ndị nka n'ime dị iche iche ekwusa na. N'ebe ahụ ị nwere ike ịchọta Boulevard de Clichy nke dị n'ụlọ Moulin Rouge na mpaghara ọkụ ọkụ ọkụ na-acha uhie uhie na Paris. Ị ga-ahụ nightlife na ezi oge dịghị matter ihe oge nke ụbọchị ị họrọ nleta. Tụlee na ịga na Moulin Rouge ekiri a Cabaret arụmọrụ!
Na-etinye na ọkacha mmasị gị ụzọ na-eje ije akpụkpọ ụkwụ, na-esi Paris ịhụ 5 Kasị Famous n'okporo ámá na Paris! Mkpa a na-agba ịnyịnya? Chere na ị dịghị mgbe ọ ga-ajụ! Jidere a tiketi site Save A Train, ugbu a. Nwere ike itinye akwụkwọ na sekọnd na enweghị ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ zoro ezo.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Kasị Famous Okporo ámá Na Paris Iji Lee” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/famous-streets-paris/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#mara mma europetravel longtrainjourneys trainjourney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ travelfrance travelparis